डिमेंशियाबाट पीडित व्यक्तिहरूको लागि अग्रणी GPS ट्र्याकरहरू सिंगापुर शीर्ष मिनी जीपीएस निजी ट्र्याकर ऑटिज्म / अटिस्टिक किड्स र डिमेन्शिया बुजुर्गका लागि
डिमेंशियाबाट पीडित व्यक्तिहरूका लागि अग्रणी GPS ट्र्याकरहरू
पाको व्यक्तिले प्रायः स्वास्थ्य समस्याहरू अनुभव गर्न सक्दछन्, दर्शन, श्रवणशक्ति वा चेतना गुमाउने सम्बन्धित छ। यी रोगहरूले गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्छ वा तपाईं आफन्तलाई गुमाउन पनि सक्नुहुन्छ। यी प्रकारका परिस्थितिहरूको लागि, वृद्धहरूका लागि जीपीएस ट्र्याकर सिर्जना गरिएको छ; एक उपकरणले व्यक्ति पत्ता लगाउनको लागि अनुमति दिन्छ।
तिनीहरू ठूला बटनहरू, सरल प्रयोगहरू, र सरलीकृत कार्यक्षमताहरूको साथ वृद्ध र बुजुर्गहरूको लागि विशेष डिजाइन गरिएको उपकरणहरू हुन्। सिम कार्ड वा जीपीएस नेटवर्कमा आधारित, दुई तर्फी आवाज संचारको साथ र बिना स्वायत्तताका साथ फरक परिस्थितिहरूको लागि ट्र्याकिंग प्रणालीहरू, केहि दिनदेखि धेरै महिनासम्म फरक हुन्छन्।
धेरै अध्ययनहरूले भने कि अल्जाइमरका of०% बिरामीहरूले उनीहरूको हेरचाहकर्ता (बच्चाहरू, नर्सहरू, आदि) बिना घर छोड्छन्। विशाल बहुमत घण्टा सम्म हिंड्छ। बिगतमा लंगर बसेको हुनाले बिरामी विचलित हुन्छ किनकि त्यहाँ हाल कुनै सम्झनाहरू छैनन्। सडकहरू, तिनीहरूको हालको कन्फिगरेसनमा, अनौंठो ठाउँहरू छन् जुन तपाईंलाई थाहा छैन।
यी अवस्थाहरूमा, टेक्नोलोजी राख्न सुझाव दिइन्छ जुन द्रुत कार्यलाई अनुमति दिन्छ, जस्तै वृद्धहरूको लागि जीपीएस लोकेटर, डिमेन्शिया वा अल्जाइमर्स भएका मानिसहरूलाई। यस तरीकाले हामी आफुमा मात्र होइन तर वृद्धहरूमा पनि तनावपूर्ण अवस्थाबाट बच्नेछौं, जसले कसरी उनीहरूको झुकावको अभावलाई ठीकसँग व्यवस्थित गर्ने र समस्यालाई बढाउने उपायहरू जान्दैनन्। अधिकांश समय जब कुनै सुखद अन्त हुँदैन, बुढो मानिस आफ्नो घर भन्दा km किलोमिटर भन्दा कम हुन्छ।
डिमेन्शिया वा अल्जाइमरको साथ वृद्धहरूका लागि जीपीएस लोकेटरले घाँटीको स्थितिमा द्रुत स्थानीयकरणको अनुमति दिईएको एम्बुलेसनको जोखिम कम गर्दछ।
स्थान मोबाइल फोन, ट्याब्लेट वा ईन्टरनेटमा जडित कम्प्युटरबाट परामर्श लिन सकिन्छ।
एल्डरको लागि लोकेटर प्राप्त गर्नु अघि, निश्चित गर्नुहोस् कि यसले तपाईंको आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ। धेरै आर्थिक विकल्पहरूले टेक्नोलोजी प्रयोग गर्छन् जुन खास परिस्थितिहरूमा उपयोगी नहुन सक्छ, जस्तै ब्लुटुथ लोकेटरहरू।
किन वृद्धहरूको लागि जीपीएस लोकेटर प्रयोग गर्न राम्रो छ?
जब हाम्रो परिवारमा कोही हराउने सम्भावना हुन्छ, मेमोरी समस्या भएको छ, अल्जाइमर्स, चतुर मनोभ्रंश, वा अन्य रोग, एक जीपीएस लोकेटर एक खरीद हो जसले हामीलाई मानसिक शान्ति दिन्छ।
हाम्रा प्रियजनहरूलाई जहिले पनि अवस्थित राख्नु केसहरूको लागि उत्तम विकल्प हुन सक्दछ जुन समयले हामीलाई निरन्तर व्यक्तिलाई हेर्ने अनुमति दिँदैन। यी लोकेटरहरूको साथ, हामी चिन्ताहरू हटाउन सक्दछौं, जहिले पनि यो जान्ने व्यक्ति कहाँ छ भनेर जानेर।
तल हामी जीपीएस लोकेटरको मुख्य कार्यहरू विस्तृत गर्दछौं:
एक माइक्रोफोनको उपस्थिति।
"SOS" उपकरण वा बटन।
सिम कार्डको उपस्थिति (उपग्रहसँग संचार बिना GSM संचार प्रदान गर्दछ)।
उपकरणको लागि खराब मौसम बिरूद्ध संरक्षक।
यसले हामीलाई नक्सामा प्रयोगकर्ताको आन्दोलन ट्र्याक गर्न, साथै जडान दूरीमा राख्न अनुमति दिन्छ।
हामी फेला पार्न सक्ने ग्याजेटहरूका प्रकारहरू
GPS ट्रैकर ब्रेसलेट वा ब्रेसलेट, पेंडन्ट, वाच, फोन वा विशेष पोर्टेबल उपकरण जस्ता आकारको बनाउन सकिन्छ।
फोन लोकेटर: यी प्रकारका फोनहरू ठूला बटनहरू र एक शक्तिशाली र टिकाऊ ब्याट्रीले सुसज्जित छन्। यो सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंसँग प्रकाश र एउटा "मद्दत" (SOS) फंक्शन मेकानिकल बटनहरूको साथ, वृद्धहरूको लागि पहुँच पुर्‍याउन। तिनीहरू सामान्यतया तपाईंलाई कार्यमा कल स्वीकार वा अस्वीकार गर्न अनुमति दिन्छ।
जीपीएस लोकेटरको साथ रिस्टवाच: यसमा बिल्ट-इन टेलिफोन, एक "SOS" बटन छ, र केहि मोडेलहरूमा एक नाडी एक्सट्र्यासन सेन्सर छ (त्यसैले हामी जान्दछौं कि यदि प्रयोगकर्ताले घडी लगाइरहेको छ कि छैन।)।
धेरै मोडेलहरू नाडी नाप्न र तीव्र ड्रप पत्ता लगाउन सेन्सरले सुसज्जित छन्।
GPS लोकेटर लटकन: यो सब भन्दा सानो र साधारण सामानहरू मध्ये एक हो। यसमा राहत बटन, एक जीपीएस मोड्युल छ स्थान पत्ता लगाउन र ड्रप सेन्सर जसले शरीरको स्थिति पत्ता लगाउँदछ र स्वतः आपातकालीन स signal्केत पठाइन्छ देखभालकर्ता वा जिम्मेवार व्यक्तिलाई।
पोर्टेबल उपकरण: पानी र धुलो जस्ता धूलोबाट बच्न आपतकालीन मेकानिकल बटन र एउटा आवरण समावेश गर्दछ। योसँग एक धेरै शक्तिशाली ब्याट्री छ र जब ब्याट्री सकियो यसले एक शिक्षकको साथ शिक्षकलाई सूचित गर्दछ।
के हो र कसरी जीपीएस लोकेटरले वृद्ध व्यक्तिको काम गर्छ?
यस उपकरणको अपरेशन एकदम सरल छ। उपकरण उपग्रहको साथ उपयोगकर्ताको स्थान को बारे मा संचार को माध्यम बाट डाटा प्राप्त गर्दछ, त्यसैले दायरा सीमित छैन। एक सिम कार्ड सम्मिलितको साथ, स्थान परिवारका सदस्यहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।
वृद्ध व्यक्तिको डाटाको साथ सूचना यस मार्फत हुन सक्छ:
यदि हामीलाई सहि ठाँउ थाहा हुनुपर्दछ कि प्रयोगकर्ता कहाँ छ भने, हामीले सिम कार्डमा ट्र्याकरमा घुसाइएको छोटो सन्देश पठाउनु पर्छ।
उपकरणले सही सन्देश GO डाटा र नक्सा (Google) मा लिंक भएको ठाउँमा मार्किंग पोइन्टको साथ परिवारलाई जवाफ सन्देश पठाउनेछ।
यस प्रकारको चेतावनी ऊर्जा खपतका सर्तहरूमा एक धेरै आर्थिक तरिका हो, त्यो हो, जीपीएस ट्र्याकर यस मोडमा सामान्य फोन प्रयोग गरेर काम गर्दछ, त्यसैले यो स्मार्टफोन प्रयोग गर्न आवश्यक छैन।
- अनलाइन निगरानी प्रणाली एक GPS ट्रयाकर जडित
देखभाल गर्नेहरूले कम्प्युटर, स्मार्टफोन वा ट्याब्लेट अनुप्रयोगको प्रयोग गरेर वृद्धलाई ट्र्याक गर्न सक्दछन्। यो एकैचोटि सबै उपकरणहरूमा पनि गर्न सकिन्छ।
तिनीहरू तिनीहरूको उच्च उर्जा उपभोक्ता द्वारा चित्रित छन्, हामीसँग सिम कार्डमा इन्टरनेट जडान पनि हुनुपर्दछ जुन ट्र्याकि device उपकरणमा घुसाइएको थियो। हामी जहिले टाढा सबै एसएमएस आदेशहरू प्रयोग गरेर सबै सेटि outहरू पूरा गर्न सक्दछौं।
वृद्धहरूको लागि GPS लोकेटर छनौट गर्दा मैले के हेर्नु पर्छ?
मुख्य रूपमा, यी उपकरणहरू फारममा फरक छन्। हामीले खातामा लिनु पर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको उपकरणको ब्याट्रीको क्षमता (पूर्व: अवधि) हो। अन्य कम्पोनेन्टहरू जुन हामीले मूल्यमा पुकार्नु पर्छ त्यो बनेको सामग्री हो। उदाहरण को लागी, सबै भन्दा महंगा उपकरणहरु मुश्किल ऊर्जा खपत र अधिक छिटो र अधिक सही काम गर्दछ।
अन्य कारणहरू जुन हामी मूल्या assess्कन गर्न सक्दछौं थप सुविधाहरू जस्तै ड्रप सेन्सर वा त्वरण मापन डिटेक्टर, जुन लोकेटरको स्थितिमा तीव्र परिवर्तनको मामिलामा, आपतकालीन एसएमएस मार्फत सूचित गरिनेछ। एक जलरोधक केस पनि एक राम्रो विकल्प हो, यो प्रतिकूल मौसम अवस्थाहरूमा सुरक्षाको रूपमा काम गर्दछ।
केहि जीपीएस मोडेलहरूमा हामी सीईओ क्षेत्र स्थापना गर्न जिओ परिधि (फेन्सिंग) प्रयोग गर्न सक्छौं, त्यसैले चिन्ह लगाइएको क्षेत्र छोड्दा ट्र्याकरले चेतावनी सन्देश पठाउँनेछ।
याद गर्नुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण चीजहरू
जब ब्याट्री ह्रासको नजिक छ उपकरणले प्रयोगकर्तालाई सूचित गर्दछ।
उपकरण मोबाइल फोन होईन, त्यसैले यसले व्यक्तिलाई यसको प्रतिकूल प्रभाव पार्दैन।
तपाईले धेरै प्रकारका लोकेटरहरू देख्न सक्नुहुन्छ जुन विभिन्न कोटीहरूमा वृद्धहरूको लागि अभिमुख हुन्छ।
4727 कुल दृश्यहरू3हेराइ आज
बिभिन्न बिरामीहरूका लागि शीर्ष GPS ट्र्याकरहरू ...
डिमेंशिया बिरामीहरूका लागि उत्तम GPS ट्र्याकरहरू